परम्परागत प्राच्य भोजन मा घर, तर पनि संसारभरिका मात्र होइन धेरै लोकप्रिय छ। रेस्टुरेन्ट राष्ट्रिय व्यञ्जन बिस्तारै धेरै सुशी बारहरू र जापानी क्याफे प्रतिस्थापित, तर धेरै मान्छे अझै पनि, पूर्वी व्यञ्जनहरु को एकदम wary छन् बिल्कुल केहि संग। वास्तवमा, प्राच्य भोजन को डर रोल र सुशी बनाउन प्रयोग उत्पादन, समुद्र उपहार मुख्य रूप नेभाराको मा मुख्य घटक प्रेरित रूपमा उपयोगी छन्, किनभने हाम्रो आफ्नै भन्दा ठूलो हुनु हुँदैन। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, बिल्कुल केहि असाधारण र जीवन खतरनाक, जापान खाना तयार को विधि कि बाहेक हामीलाई परिचित देखि धेरै फरक छ, र एक पूर्ण फरक तरिका गर्दछ। बारेमा कति क्यालोरी एक रोल मा, आफ्नो संरचना मा पाउन सकिन्छ, तर प्रायजसो, केही यसलाई पूर्ण किनभने, चिन्ता गर्न एक आहार उत्पादन, संख्या हानि गर्दैन।
परम्परा पकाउने रोल फिर्ता माछा र भात को जाडो लागि तयारी गरे जब प्राचीन, गर्न। चामल एक संरक्षण गर्ने बस्तु रूपमा काम गरे, त्यसैले खाना मात्र माछा र भात नष्ट गरिएको थियो खपत। आफ्नो मान्छे तयार मात्र XV शताब्दीमा सिकेका र देशमा जापानी शेफ को कौशल गर्न मात्र4शताब्दीपछि हुनुको आउनुभयो, धन्यवाद। तब देखि, त्यहाँ रोल को प्रकार को धेरै थियो: तेज, क्लासिक, तातो - तपाईं हरेक स्वाद को लागि एक पकवान छनोट गर्न सक्नुहुन्छ! तपाईं Rolla छन् कति क्यालोरी रुचि राख्नुहुन्छ भने, आदेश गर्नुअघि, सामाग्री ध्यान। अक्सर रोल चामल, ककडी, Avocado, शैवाल र कच्चा माछा समावेश, तर यो सेवा प्रति क्यालोरी अधिक 150-200 भन्दा छ। खैर, गर्भवती महिलाहरु, यो राम्रो कुनै कुरा विचार कम क्यालोरी खाना लाग्न सक्छ कसरी प्रलोभनमा पार्न, कच्चा माछा खान छैन।
रोल को सबै भन्दा लोकप्रिय फारम, पाठ्यक्रम, "फिलाडेल्फिया" छ: यो अक्सर जापानी क्याफे र रेस्टुरेन्ट मा जवान मान्छे किनेको छ। कति एक मा क्यालोरी बारेमा रोल "फिलाडेल्फिया", हामी सामाग्री र व्यञ्जन खाना पकाउने को विधि सिक्न मात्र पछि न्याय गर्न सकिन्छ। यसको पूर्ण जापानी शीर्षक रोल पकवान को भाग हो जो पनीर, गर्न आवश्यक छ। को रोल को क्यालोरी अंश दूध र क्रीम र प्रत्येक घटक ताप भोजन लागि विभिन्न हुनेछ भनेर, पनीर शामिल कि संयोजन को बोसो सामग्रीमा निर्भर गर्दछ। सामाग्री बाँकी आफ्नो आंकडा कुनै पनि हानि गर्न छैन: सामन, ककडी, चामल र nori एक पाना। रोल तयार लागि विधि "फिलाडेल्फिया" उत्पादनहरु को कुनै पनि उपचार, बाहेक होइन चावल खाना पकाउने, ताकि अतिरिक्त क्यालोरी, साथै हानिकारक carcinogens पकवान समावेश सबै प्रकारका। एक रोल, यो एक सेवा "फिलाडेल्फिया," "" बारे 350 किलो कैलोरी र अदुवा र वसाबी वजन बताए गर्नुपर्छ कति क्यालोरी बारेमा प्रश्नको जवाफ, एक पूरक रूपमा सेवा, राम्रो वजन बढावा जो चयापचय, गति।
टाढा द्वारा लगे जापानी भोजन, हामी यस राष्ट्रको मुख्य सिद्धान्त बारे बिर्सनु हुँदैन: "। सबै कुरा मा संयम र एकता" 66-120 किलो कैलोरी: तपाईं Rolla सबैभन्दा सरल प्रकार मा कति क्यालोरी पत्ता यदि गर्दा अविश्वसनीय कम दर सामना, त्यसपछि छक्क। तथापि, तपाईं पनीर वा बाम माछा संग रोल धेरै सर्विंग्स खान भने, अतिरिक्त किलो छैन बचा गर्न सकिन्छ। साँच्चै जापानी दार्शनिक मुड संग पूर्वी खाना व्यवहार, र अतिरिक्त वजन को समस्या लागि सान्दर्भिक हुने छैन।
समीक्षा, दर, अवस्था: "Absolut बैंक बाट बंधक
आकार एस - के उहाँले साँच्चै छ र के आकार अनलाइन किन्न?
इन्जिन ठंडा सिस्टम निस्तब्धता लागि हो। को धुने र कसरी यो के गर्ने?
खोज इन्जिन मा र्याङ्किङ्ग Yandex कारक
Stas Natanzon: गतिविधिहरु र घटना
अपर्याप्त गुणस्तरको सामानहरूको परीक्षा: सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया, समाप्ति